Faahfaahinta mowjadda qabow ee Siberia ee ku dhufatay Spain | Saadaasha Shabakadda
Qabowga qabow inaan ka soo jeedno Siberia asal ahaan waxay gaadhay meeshii ugu sarraysay Spain oo dhan. Sida diiwaanka heerkulka, waxay gaarayaan gaar ahaan hoos u dhac aan caadi ahayn.
Kaliya maaha qabowga, laakiin roobka iyo dabaysha ayaa gacan ka geysanaya hirkan qabow ee hoos u dhigaya heerka barafka meelaha aan la filayn. Aynu eegno faahfaahinta qaboojiyaha Siberia.
1 Heerkulka ka hooseeya eber
2 Heerarka barafka
3 Digniinta qaarkood ee ka dhanka ah cimilada xun
4 Kororka isticmaalka korontada
Heerkulka ka hooseeya eber
Magaalooyinka qaar ee Lleida, heer kulku aad ayuu u hooseeyay oo wuxuu gaaray -12 digrii. Heerkulka kale ee hooseeya ayaa taagan, sida ugu yar saldhigga Lleida-Bordeta, halkaas oo heer kulka -7,4 digrii lagu duubay. Diiwaanka heerkulka hoose ee maalinta Catalonia, si kastaba ha ahaatee, ayaa calaamadeeyay Das, oo ku taal La Cerdanya, oo leh -21,6 digrii.
Sida laga soo xigtay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka, saddexda gobol ee Aragon, Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria, Zamora, Girona, Lleida, Navarra, La Rioja, iyo Asturias ayaa ku jiri doona digniin liin (halis muhiim ah) heerkulka oo hooseeya awgeed. Waxay sidoo kale leeyihiin digniin ku saabsan halista muhiimka ah ee jasiiradaha Balearic sababo la xiriira bariga oo ku qarxi doona Mallorca iyo Menorca oo abuuraya ifafaale xeebeed, sida Girona, digniinta liinta ee isla sababtaan, maadaama dabeyl xoog leh laga filayo duufaanno aad u xoog badan oo ku yaal Empordà
Heerarka barafka ayaa aad u hooseeya oo barafku wuxuu gaadhay xeebta Alicante wuxuuna daboolay dawladaha hoose sida Dénia iyo Xàbia oo midabkoodu cad yahay, waxayna keentay inuu gooyo isu socodka wadada Les Planes, oo isku xidha labada magaalo ee ku teedsan Montgó. Baraf noocan oo kale ah lama diiwaan gelin ilaa 80-yadii.
Digniinta qaarkood ee ka dhanka ah cimilada xun
Degmooyinka heerkulkoodu hooseeyo oo aad u qabow badan ayaa kugula taliyay Ha qaadan gaarigaaga haddii uusan daruuri ahayn, maadaama ay sababi karaan khatar iyo dhibaatooyin xagga wareegga ah. Degmada Dénia, fasalada iskuullada waa la joojiyay.
Kororka isticmaalka korontada
Mawjadaha qabow ee Isbaanishka ayaa kordhiyay isticmaalka korontada ee kuleylka. Tani waxay horseeday xaddidaad aan la gaarin tan iyo sanadkii 2012. Catalonia, isticmaalka korontada ayaa kordhay 7% sababtoo ah mowjadaha qabow tan iyo markii ay uga tagtay ku dhowaad dhammaan bulshada heerkul ka hooseeya eber darajo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hirar qabow » Faahfaahinta mawjadaha qabow ee Siberia ee ku dhaca Spain
Mowjadaha qabow ma xiriir la leeyihiin isbeddelka cimilada?